Momo Developer Hello Group သည် ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယ စာရင်း ပြု ရန်စီစဉ် နေသည် - Pandaily
Momo Developer Hello Group သည် ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယ စာရင်း ပြု ရန်စီစဉ် နေသည်
Feb 14, 2022, 20:38ညနေ 2022/02/14 23:07:37 Pandaily
Hello Group (ယခင်က Momo Company ဟု လူသိများ) သည် သူစိမ်း များနှင့် စတင် တွေ့ဆုံ ခဲ့သည့် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာရင်းဝင် ရန်စီစဉ် နေသည်။ တရုတ် မီဒီယာ တင်ပို့မှုမ်က္ႏွာ သစ္ သတင္းအဆိုပါ စာရင်းကို Goldman Sachs နှင့် China International Finance Corporation တို့က ကမကထပြု လိမ့်မည်ဟု တနင်္လာနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Hello Group ကေတာ့ ဒီ သတင္းကို မွတ္ခ်က္ ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ ခဲ့ပါတယ္။
ဒီ ကိစ္စကို အကျွမ်းတဝင် ရှိ သူများက ဒုတိယ စာရ င်းသည် စိတ်ကူး သစ် တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ စာရင်း ကောင်း သွား လျှင် ကုမ္ပဏီသည် နောက် ခြောက်လ မှတစ် နှစ်အတွင်း အများပြည်သူ သိ ရှိနိုင်သည်။
Hello Group သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ ၇ နှစ်ကြာ စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် Nasdaq တွင် Morgan Stanley ၊ Credit Suisse နှင့် JP တို့နှင့်အတူ JP Morgan Chase Corporation ကို underwriters အဖြစ် စာရင်းသွင်း ခဲ့သည်။ Momo , Tantan နှင့် Hertz စသည့် စမတ်ဖုန်း အက် ပလီကေးရှင်း များအပြင် ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူး ခြင်း၊ ပရိုဂရမ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဘဏ္ investment ာရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများအပါအ ၀ င် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက်များအရ ကုမ္ပဏီ တွင် လစဉ် တက်ကြွစွာ အသုံးပြုသူ ၁၁၅. ၅ သန်း ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၎င်း ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် အတွက် အသားတင် ၀ င်ငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅ ၈၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၀. ၂% ကျဆင်းခဲ့ပြီး အသားတင် အမြတ် မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂. ၆ သန်း ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၁. ၈% ကျဆင်းခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ အရ မို မို နှင့် ဗုံး သည် ၈၆. ၄% နှင့် ၁၃. ၆% အသီးသီးရှိသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် Momo Live Live နှင့် Value Added Services အတွက် ပေးဆောင် သူ စုစုပေါင်း မှာ ၁၂. ၂ သန်း ရှိပြီး ၂. ၉ သန်း မှာ ဗုံး များမှ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလတွင် ၁၃. ၁ သန်းနှင့် ၄. ၁ သန်း အသီးသီးရှိသည်။
Hello Group သည် ၎င်း ၏လက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အပြင် ရှေ့သို့ ချီတက် ရန်ကြိုးစား နေသည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွာ လူငယ္ ေတြရဲ႕ share နဲ႔ recommendation လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို အခြင့္ ေကာင္း ယူ ဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားတဲ့ Shu Mei (တရုတ္ ဘာသာ “Raspberry”) လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ app ကို မိတ္ဆက္ ဖို႔ ဒီ အဖြဲ႔က စီစဥ္ ထားပါတယ္။ အထူးသဖြင့် application ၏ user interface သည် Xiaohongshu နှင့်အလွန် ဆင်တူသည်။ အက် ပလီကေးရှင်း ၏ ပင်မ စာမျက်နှာ သည် အသုံးပြုသူများ နေ့စဉ် ဖတ် ရလွယ်ကူ သော ဇယားကွက် ဖြင့် မျှဝေ ရန် မှတ်စု များကို အကြံပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် မှတ်စု အသစ် တစ်ခုကိုဖန်တီး ရန် အောက်ခြေ ရှိ အပေါင်း သင်္ကေတ ကိုနှိပ် ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ မှတ်စု များကိုမ ျှ ဝေ နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:မို မို က မ်ိဳးဆက္ သစ္ လူငယ္ မ်ားအတြက္ Sumi အမည္ရွိ Content Sharing App မိတ္ဆက္ မည္
Hawaters’ Group ဟု အမည္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေၾကညာ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလူမႈေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Hello Group သည္ Inc. Mon ဟု အမည္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎၏ ‘Hello Group မွ ‘Hello Group Inc.’ ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
Industry Aug 03 ဩဂုတ် 3, 2021